mumwezve anotakura anotangisa nyika yose 5g network
Kuru Nhau & Ongororo Asi mumwe mutakuri weUS anotangisa nyika ye5G network
Asi mumwe mutakuri weUS anotangisa nyika ye5G network
Vatakuri vasina waya vatakuri muUS havawanzo kutariswa zvakafanana neVerizon, AT & T, uye T-Mobile, asi maererano neongororo ichangoburwa, vamwe veava vatambi vadiki mumaindasitiri emagetsi vanogona kunyatso chengetedza vatengi vavo zvakanyanya kugutsikana sembwa dzepamusoro ita.
Cricket, yaive nhamba yekutanga 'isiri-chibvumirano chizere-sevhisi' inotakura mu ichangoburwa J.D. Power isina waya yekutenga chiitiko mushumo , yakakwenenzvera mapoinzi matatu chete pasi peT-Mobile, iyo yaitonga chati yakabhadharwa, nepo ichidarika marefu mairi ese AT&T neVerizon.
Zvinotoshamisa ndezvokuti, Cricket Wireless ndeya AT & T, iyo yaibvumidza mubhadharo webhadharo kuti aite zviziviso zviviri zvinonakidza pamberi pevhiki kutanga. Chekutanga, Cricket vatengi vanogona ikozvino kunakidzwa ne5G network kuwana 'nyika yese' , kunyange hazvo zvichingoenda pasina kutaura kuti yambiro yambiro uye mapako anoshanda.
Kuputirwa kwe5G, zvirongwa, uye nhare
Zviripachena, Cricket & apos; s 5G kufukidza haina & apos; haina kusiyana ne kuwanikwa kweiyo 'yakakwira-mhanya' sevhisi yevanobhadharirwa vatengi veAT&T , iyo inosundira tsananguro yeicho chinowanzo fungwa sechipo chenyika yese na inovhara vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu pamisika makumi matatu nemakumi matatu nemashanu .
Iyo yekumhanyisa kusimudzira haina zvakare kukosha zvakanyanya panguva yacho, sezvo huwandu hwayo misika iyo inogona chete kuwana yakaderera-bhendi 5G chiratidzo. Izvi zvinofamba zvakanyanya kupfuura wepakati-bhendi kana mmWave tekinoroji, ichipinda mukati mese mhando yezvipingamupinyi, asi ayo ekurodha manhamba ari inowanzo fananidzwa neiyo inowanikwa pa 4G LTE yekubatanidza .
Kune izvo zvinokoshesa & apos; Cricket iri kupa zvese 5G uye 5G + sevhisi, iyo yekupedzisira inovimba neyakafanana mamiriro-e-iyo-mhizha mmWave tekinoroji inoshandiswa kuVerizon & apos; s inopisa nekukurumidza Ultra Wideband network, iripasi iripasi kuve yakasviba kana chaiko kusavapo kufukidza kunze kwemamwe maguta makuru.
Kana iwe & apos; usiri kunyanyo kunetswa neizvi zvinonetsa uye uchiri kuda kuve wekutanga 5G Anogamuchira Cricket, iwe & apos; munofanira kumwaya mari pa $ 1,200 Samsung Galaxy S20 + 5G uye kumutsa iye mukomana akashata pane yepamwedzi Simply Data chirongwa chinodhura $ 35 uye kumusoro. Kutaura nezvazvo, iyo Simply Dhata lineup iri kuwedzeredzwa nemutengo mutsva $ 90 pamwedzi sarudzo inosanganisira zana magighi yedhijitari yedhivha, zvichienzaniswa ne $ 35 ne $ 50 zvirongwa zvinouya chete ne20 uye 40GB yedhivhidhi-data zvakateedzana.
Patinoti iwe & apos; llhavekutenga iyo Galaxy S20 +, mufunge, isu tinoreva kuti mupfungwa chaiyo yeshoko, sezvo simba re6,7-inch iri yenguva iyo iri iyo yega uye chete 5G-inokwanisa smartphone inowanikwa kubva kuCricket. Padivi rakajeka, unogona kusarudza izvo zvinonzi kufambira mberi kwekubatira uye nekuparadzanisa zvambotaurwa $ 1,200 mutengo muvhiki, bi-vhiki, kana pamwedzi zviyero, kunyange hazvo pari zvino pasina zvidzoreso zvekuve nazvo chero, chingave chine mudziyo wekutengeserana-mukati kana nhamba yekupinda-mukati.
Promo nyowani nyowani uye dzimwe nzira dzekubhadhara dziripo
Chimwe chiziviso chikuru ndechekuti vese vanyoreri veCricket Wireless vanogona kuwana yemahara 30-mazuva kutongwa kuHBO Max , iyo nyowani vhidhiyo inomhanyisa chikuva kubva kune chero mumwe kunze kweAT&T. Kuti utore yako yemhando yeNetflix imwe nzira, unofanirwa shanyira iyi link uye kusaina.
Ramba uchifunga kuti uchabhadhariswa $ 14.99 pamwedzi panopera mwaka wekusimudzira, saka usakanganwe kukanzura kunyorera kwako panguva yakafanira kana iwe usiri kuda kuti zviitike.
Mune dzimwe uye zvishoma zvisinganyanyi kukosha nhau, Cricket iri kuwedzera Apple Pay, Google Pay,uyeSamsung Bhadhara munzvimbo dzese dzekambani-dzakashambadzirwa nzvimbo dzekutengesa nemasevhisi maapplication, ichiva nyika & apos; s yekutanga isina-yegore kondirakiti isina waya mupi kutsigira ese matatu anoshandiswa zvakanyanya 'nzira' dzekubhadhara nzira
Samsung Galaxy S10, S10 +, uye S10e mitengo: Ona kuti yako yaunofarira S10 modhi inodhura
LG V30 vs Samsung Galaxy S8 + yekutanga kutarisa kuenzanisa
Mahwendefa mashanu ane mashandiro efoni